Kulan arimaha xuduudaha looga hadlayay oo Muqdisho lagu qabtay-Sawirro | Baydhabo Online
Kulan arimaha xuduudaha looga hadlayay oo Muqdisho lagu qabtay-Sawirro
Kulankan oo ka dhacay magaaldda Muqdisho ayaa looga hadlay qaabka ugu wanaagsan ee looga shaqeyn karo xuduudaha maamul goboleedyadda dalka.
Kulankan oo ay soo qaban gudiga madaxa banaan ee xaduudaha iyo federaalka oo kaashanaya hey’adda lagu magacaabo Max Plan Foundation taas oo ka shaqeysa arrimaha xasiloonidda, nabadda iyo sidoo kale La-talinta sharciga.
Waxaa kulanka ka qeyb galay mas’uuliyiin ka socday guddiga madaxa banaan ee xaduudaha iyo federaalka iyo mas’uuliyiin kale oo ka socday hey’adda Max Plan Foundation taas oo guddiga ka taakuleysay tababaridda shaqaalaha guddiga xaduudaha iyo arrimo kale.
C/Qaadir Cismaan Yuusuf, oo ah madaxa Shirka Max Plan ayaa sheegay inay bixiyeen tabaro badan oo ku saabsan dhanka dastuurka iyo sidoo kale xaduudaha.
Guddoomiyaha gudiga xaduudaha iyo federaalka Khaliif C/Kariin Maxamed, ayaa sheegay in hey’adda Max Plan Foundation ay wax badan ka garab siisay taas oo kamid yihiin shaqooyinka kala duwanaa oo ay ka qabteen inta badan maamul goboleedyadda.
Ugu dambeyntii ayaa waxaa shahaadooyin Sharafeed la gudoonsiiyey Madaxda Shirkadda Max Plan Foundation taas oo Shaqadeeda intaan ku e keyn.